Iphuli, ulwandle kwaye uphumle! Iindwendwe ezi-6
I-92% yeendwendwe zakutshanje inike uMattia iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Apartment Pini ibekwe kumgangatho ophantsi we-Villa Torretta kwaye inokusingatha ukuya kuthi ga kwi-6 abantu kwaye ibonelelwe ngegadi entle enokufikelela ngokuthe ngqo kwindawo yedama! Kufuphi elunxwemeni, kukho iWi-fi
Ibekwe kumgangatho ophantsi weCasa Torretta, ifulethi iPini yenziwe ngamagumbi amabini okulala aneebhedi ezimbini, igumbi lokuhlala elinekhitshi elinebhedi yesofa kunye namagumbi okuhlambela amabini. Le ndlu inegadi yabucala encinci phambi kwayo, enetafile yangaphandle ukuze ukonwabele ukutya kwakho ngaphandle.
Le ndlu ikwindawo yaseCasa Torretta, eyenziwe ngamagumbi ayi-6 azelwe ukusuka kulungiso lweVilla endala embindini wemithi yomnquma. Uya kuba nakho ukonwabela umbono omangalisayo kwiGulf of Patti kunye nesiqithi saseAeolian ngelixa uhleli kwicala lephuli, okanye ngaphantsi kwenye yeeGazebos ezimbini ezifumaneka kwiindwendwe zethu ngelixa usonwabela iglasi yewayini eqhelekileyo ekhoyo kwibhari yethu.
4.59 · Izimvo eziyi-31
ICasa Torretta ibekwe kwindawo yokuhlala ezolileyo, eyona ndawo ifanelekileyo yeholide yokuphumla! Ikwakonwabela umbono ophefumlayo phezu kweZiqithi zeAeolian.
UNicola (umnini-ndawonye weCasa Torretta) uya kubakho ixesha elininzi ukukunceda ngayo nayiphi na imfuno onokuba nayo.
Mna kunye nosapho lwam sinamava amahle malunga nokuhamba kwaye sonwabele ukudibana neendwendwe zethu kwaye sibancede benze okuninzi kwiholide yabo, ke zive ukhululekile ukusibuza malunga nawo nawuphi na umsebenzi othi qatha engqondweni yakho kwaye siya kuba nakho ukuyiququzelela. wena (kwaye mhlawumbi ufumane isaphulelo ngokunjalo)!
Mna kunye nosapho lwam sinamava amahle malunga nokuhamba…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gioiosa Marea